Radio Voanio - Accueil
F?ra zaza faobe
Ny 21 jolay hatramin’ny 2 agositra
Rue Rolland Garros Toamasina 501
Toujours plus de nouveaut?s !
TOP 40 (USA)
TOP 50 (FR)
Star O Mic
Qui sont les JRC
Mes pr�f�rences Email
Alahamady (21/03 - 19/04)
Adaoro (20/04 - 20/05)
Adizaozo (21/05 - 20/06)
Asorotany (21/06 - 22/07)
Alahasaty (23/07 - 22/08)
Asombola (23/08 - 22/09)
Adimizana (23/09 - 22/10)
Alakarabo (23/10 - 21/11)
Alakaosy (22/11 - 21/12)
Adijady (22/12 - 19/01)
Adalo (20/01 - 18/02)
Alohotsy (19/02 - 20/03)
BNGRC Atsinanana (27-05-21)
Fivorian'ny "commandant d'unité" (27-05-21)
Fanaovam-baksiny andiany voalohany (26-05-21)
Antso ho an'ny tanora (26-05-21)
Vaksiny AstraZeneca (26-05-21)
Vovonana HINA (25-05-21)
Ala arovana any Ambodiarana (25-05-21)
Covid 19 (24-05-21)
Dr H.Sablon (20-05-21)
Vaksiny AstraZeneca (20-05-21)
Trano fonenana manaram-penitra (19-05-21)
Tilapia de l'Est (19-05-21)
Articles en Historique
Tonga nanao vaksiny ny solombavambahoaka Rolland Ratsika
Tonga nanao vaksiny ny solombavambahoaka voafidy teto amin'ny renivohitra Toamasina Andriamatoa Rolland Ratsiraka androany alarobia 26 may 2021. Nampahafantariny ihany koa ny fanambarana navoakan'ny "Organisation Mondiale de la Santé" na ny OMS fa raha tsy vita vaksiny ny 30% ny mponina amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara dia tsy ho afaka amin'nity valan'aretina covid 19 ity isika fa mety mbola ho hisy ny andiany fahatelo araka ny vinavina nataon'ireo manam-pahaizana.
Hita taratra hoy izy ny fahasarotana iainan'ny mponina amin'ny fiainana andavandro ny amin'ny fahatapahan'ny lalana. Manoloana izany indrindra dia mampirisika ny vahoaka sy ireo solombavambahoaka namany ny tenany mba hanao ity vaksiny astraZeneca ity na dia teo aza ny fanaratsiana azy. Raha tena manam-paniry ny hiverina amin'ny fahafahana tanteraka isika dia tokony maro arak'izay azo atao ny olona vita vaksiny hiadiana amin'ity areti-mandoza covid 19 ity.
Tokony ho laharam-pahamehana ny fahasalamam-bahoaka hoy izy ny amin'ny famatsiana ireo fitaovana ilaina rehetra eny amin'ny tombim-pahasalamana hitsaboana ireo marary.
(214) S.Lantomalala : 26-05-2021 - 14:00
Misokatra ho an'ny rehetra ny fanaovam-baksiny
Mbola mitohy ny fanaovam-baksiny eny amin'ny faritra rehetra, nilaza moa ny Filoham-pirenena fa efa miparitaka manerana ny nosy izany, nomarihiny tsara fa tsy atao an-katerena ny fanaovana izany fa an-tsitra-po.
(224) S.Lantomalala : 01-06-2021 - 10:30 ....Lire la suite
CISCO Toamasina I
Nizara DLM 221 isa
Hoan'ny CISCO ny Toamasina voalohany dia efa nisy roa herinandro izay no niverina an-tsekoly avokoa ireo mpianatra rehetra na miakina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Na izany aza anefa dia tsy tokony variana ny amin'ny fanarahana ireo fepetra sakana rehetra ny tsirairay.
(223) S.Lantomalala : 01-06-2021 - 09:30 ....Lire la suite
Niarahaba ny reny rehetra i Ramatoa vadin'ny ben'ny tanana
Ny alahady 30 may 2021 no daty nankalazana ny fetin'ny reny. Niarahaba manokana ny reny rehetra i Ramatoa Mélise Rakotonirina vadin'ny ben'n tanana ny Toamasina voalohany.
(222) S.Lantomalala : 31-05-2021 - 10:00 ....Lire la suite
Misokatra ny lalana manerana ny nosy
Nanao valandresaka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny omaly alahady 30 may 2021.
(221) S.Lantomalala : 31-05-2021 - 09:00 ....Lire la suite
© 2013-2021 - Designed by Pro Media Consulting